Akụkọ - Olee otu anyi kwesiri isi choputa ndi n'eme igwe lathe
Olee otú anyị kwesịrị n'ụzọ ziri ezi họrọ elu mma CNC lathe Nsukka
Isi ihe eji eme ngwa ahia di elu nke ihe eji eme ihe n'igwe oru na-etinye uche na Pearl River Delta na Yangtze River Delta region, nke onu ogugu ndi na emeputa lathe CNC bukwara oke. Yabụ otu esi ahọpụta ndị nrụpụta lathe nhazi CNC? Wally ígwè technology ga-agwa gị banyere:
Nke mbụ, tupu ị họrọ ụlọ ọrụ nhazi nke CNC lathe, anyị ga-aghọta na onye nrụpụta lathe dị elu nke CNC nwere àgwà ndị ahụ, otu esi arụ ogo dị elu?
1. Ndị na-emepụta lathe dị elu nke CNC kwesịrị ibu ụzọ lee onyinyo na ọdịnala nke ụlọ ọrụ ahụ anya. Isi ihe mere o ji esiri ike ịmalite ọdịbendị na ụlọ ọrụ igwe ọrụ bụ na ogo ndị ọrụ zuru oke. Ọ bụrụ na a CNC lathe nhazi factory nwere ezi mpụga image na ụlọọrụ omenala, ọ na-egosi na ndị enterprise management bụ nnọọ enyịn, na nwere magburu onwe mkpara ọzụzụ na omenala ìgwè Njirimara nke àgwà suppliers.
2. Ihe nke abuo nke ulo oru nhicha nke CNC lathe bu isi nke 7S. E jiri ya tụnyere ụlọ ọrụ eletriki, 7S na ụlọ ọrụ nhazi igwe na-esikwu ike itinye. Ọ bụrụ na nhazi 7S na ndozi na ogbako ahụ dị ezigbo mma, anyị ga-arụ ezigbo ọrụ na mpaghara nke 7S, ntinye ihe onwunwe na nhazi ọrụ Ndị na-emepụta ihe nwere ike belata omume nke ọtụtụ ngwaahịa na-adịghị mma, nnyefe ga-adịkwu n'oge.
3. Lelee njuputa mmejuputa iwu nke ulo oru oru sistemu, na e kwuru usoro, usoro nnyefe usoro, usoro mmepe usoro, àgwà akara usoro na usoro usoro. Ọ bụrụ na ọnọdụ ndị a dị n'elu ga-ezute, ọ na-egosi na ọrụ nke ụlọ ọrụ ahụ dịkwa mma ma nwee njirimara nke ụlọ ọrụ mmepụta ihe lathe dị elu nke CNC.
Na okwu, magburu onwe CNC lathe Nsukka nwere ezi mpụga image na tozuru okè management otu, na ogologo oge ọrụ kpụrụ a ọma ụlọọrụ omenala ikuku. Volley ígwè technology ọhụụ bụ na nkenke machining nwere ike inyere nkà na ụzụ ọhụrụ. Anyị na-atụ na-abụ onye pụtara ìhè processor na ubi nke n'ibu nhazi na-eme ka China si ọhụrụ na technology.